PTTEP South Asia Ltd. ၏ ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ကွက် Block MD-7 တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ခြင်းအစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၄/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစီရင်ခံစာ စိစစ် သုံးသပ်ရေး အစည်းအဝေး
Published by ecdadmin on Thu, 02/20/2020 - 08:22
Read more about PTTEP South Asia Ltd. ၏ ကမ်းလွန်ရေနံလုပ်ကွက် Block MD-7 တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ခြင်းအစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၄/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစီရင်ခံစာ စိစစ် သုံးသပ်ရေး အစည်းအဝေး
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေး ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Nationally Determined Contributions-NDCs) ပြုစုရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၉-၂-၂၀၂၀)(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
Published by ecdadmin on Wed, 02/19/2020 - 11:02
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) နှင် ပါရီသဘောတူညီချက် (Paris Agreement) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် ပါရီသဘောတူညီချက်၏ အကြိုလုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး ကတိကဝတ်များ နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းဆိုင်ရာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည့် Myanmar Intended Nation
Read more about မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေး ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Nationally Determined Contributions-NDCs) ပြုစုရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁၉-၂-၂၀၂၀)(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်
"တတိယအကြိမ် မြန်မာ-ဂျပန် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ (3th Myanmar-Japan Policy Dialogue on Environmental Issues) " ကျင်းပခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Published by ecdadmin on Fri, 02/07/2020 - 10:34
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ မြန်မာ-ဂျပန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (Bilateral Meeting)ကို ယနေ့နံနက် ၉
Read more about "တတိယအကြိမ် မြန်မာ-ဂျပန် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ (3th Myanmar-Japan Policy Dialogue on Environmental Issues) " ကျင်းပခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဆဋ္ဌမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖိုရမ် (6th Green Economy Green Growth-GEGG Forum) နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Published by ecdadmin on Tue, 02/04/2020 - 06:57
Read more about ဆဋ္ဌမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖိုရမ် (6th Green Economy Green Growth-GEGG Forum) နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Published by ecdadmin on Fri, 01/31/2020 - 08:57
The MOU for implementation of Green Cities Readiness Project was signed by GCF National Designated Authority Mr. Hla Maung Thein, Director General of Environmental Conservation Department on 30 Jan, 2020. GGGI and the Environmental Conservation Department will jointly implement the Green Cities Readiness Project overaperiod of2years in4cities in Myanmar.
Read more about Green Cities Readiness Project Launch
Published by ecdadmin on Thu, 01/30/2020 - 09:28
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန အကြံပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသော Junko Nishikawa (Ms)နှင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် ပူးတွဲပါ အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် Junko.monrec@gmail.com သို့ လျောက်လွှာ များပို့ လျောက်ထားနိုင်သည်။
Read more about ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for Development Programme - OfD) အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး (Annual Meeting 2020) ကျင်းပခြင်း။
Published by ecdadmin on Wed, 01/29/2020 - 04:11
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ရာသီဥတုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (Norwegian Environment Agency – NEA) တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for Development Programme-OfD) ၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အထိ အ
Read more about ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for Development Programme - OfD) အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး (Annual Meeting 2020) ကျင်းပခြင်း။
Published by ecdadmin on Wed, 01/22/2020 - 09:06
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသောအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အပိုဒ် ၄၁ (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၈၀ (ဂ) အရလည်းကောင်း အမျ
Published by ecdadmin on Wed, 01/22/2020 - 08:27
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသောအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၄၁ (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၈၀ (ဂ) အရလည်းကောင်း အမျာ